Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo wada mooshin ka dhan ah Saldhiga Immaaraadka Carabta ee Berbera. – Xeernews24
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo wada mooshin ka dhan ah Saldhiga Immaaraadka Carabta ee Berbera.
Xildhibaanada Baarlamaanka Feederaalka ah ee Soomaaliya ayaa wada mooshin ka dhan ah Saldhiga Milateri ee Imaaraadka carabta ka sameysaneyo magaalada Berbera ee Maamulka Somaliland.
Golayaasha Guurtida iyo Wakiilada Soomaliland ayaa bishii la soo dhaafay ansixiyay heshiis ay kala saxiixdeen Maamulka Somaliland iyo Imaaraadka carabta, kaasoo dhigaya in Imaaraadka Saldhig ka sameysto garoonka diyaaradaha Berbera.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Feederaalka Soomaaliya ayaa sheegay in heer gabo gabo ah uu u marayo diyaarinta mooshinkan, ayna maalmaha soo socda hor-geyn doonaan Guddoonka Baarlamaanka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/golaha-shacabka.png 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-06 09:03:062017-03-06 09:03:06Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo wada mooshin ka dhan ah Saldhiga Immaaraadka Carabta ee Berbera.
Diwaangelin la’aantii iyo ka xayiraadii doorashada degaanadda qabiilka... Dawladda Boqortooyada Ingriisku waxay qabtaa aragtida faderaaliga ah ee Somaliya...